မြင့်သော အရှိန် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > မြင့်သော အရှိန် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
မြင့်သော အရှိန် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး မြင့်သော အရှိန် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ quတစ်ဦးter-အလှည့် လျှောက်လွှာများ - ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmpers နှင့် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ၏ rotတစ်ဦးry စက် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque အကွာအဝေး ၏ 50Nm သို့ 6000Nm.Bတစ်ဦးsed အပေါ် စက်မှုလက်မှု သဘောတရား နှင့် ကြွယ်ဝသော အတွေ့အကြုံ, AOX ကုမ္ပဏီ၏ ထူးခြားသော စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်မှု ဖြစ် အဆိုပါ အခြေခံ မောင်းနှင်မှု ဘို့ce ဘို့ အားလုံး ကုန်ပစ္စည်း တိုးတက်ရေး နှင့် သိပ္ပံနည်းကျသော ကုန်ပစ္စည်းiအပေါ်. AOX ကုမ္ပဏီ ဖြစ် ကြီးထွားလာ တွင်သို့ တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g ကုမ္ပဏီ တွင် vတစ်ဦးlve အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု တွင်dustry နှင့် တစ်ဦးdvတစ်ဦးnced နည်းပညာ။
AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်လေးပုံတပုံများအတွက်ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 1. Wide အကွာအဝေးလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်လေးပုံတပုံများအတွက် 3. ဖြုတ် drive ကိုဘုရ်ှလျှပ်စစ် actuator turn
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတင်းကျပ်, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်လျှပ်စစ် actuator turn AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်လေးပုံတပုံများအတွက်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပြီး အရည်အသွေးကိုအားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးလှံတံ၏သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်လေးပုံတပုံကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
မေး: လျှပ်စစ် actuator turn AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်သုံးလပတ်မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
မေး: သင် AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်လေးပုံတပုံများအတွက်စတော့ရှယ်ယာများပါနဲ့လျှပ်စစ် actuator turn?
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်